No Man’s Land Complete – Alpha Premium
No Man’s Land Complete
Original nameNo Man's Land
Created byAmit Cohen, Eitan Mansuri, Maria Feldman
StarringCéline Samie, Félix Moati, James Floyd, James Purefoy, Joe Ben Ayed, Julia Faure, Mélanie Thierry, Souheila Yacoub
Synopsis of No Man’s Land Complete
စဈကားတှကေိုကွိုကျတတျတဲ့ ပရိတျသတျကွီးအတှကျ ဇာတျလမျးတှဲကောငျးလေးတဈခု တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ
အနျတိုနီဆိုတဲ့လူက သဆေုံးသှားပွီဖွဈတဲ့ သူ့ညီမကို ဆီးရီးယားကစဈသတငျးတဈခုမှာ တှလေို့ကျရပွီးတော့ သူ့ညီမကိုရှာဖို့အတှကျ ဆီးရီးယားကိုလိုကျလာရငျး ကတျဒျလူမြိုးတို့ရဲ့ တပျဖှဲ့ထဲမှာပါဝငျပွီး ISIS တှကေို တိုကျခိုကျလာရတဲ့အခါ….
တဈဖကျက ISIS တပျဖှဲ့မှာလညျး ငယျစဉျကတညျးက အတူတူကွီးပွငျးခငျမငျလာတဲ့ သူငယျခငျြး ၃ ယောကျသားရဲ့ဇာတျလမျး…
ဒီတပျဖှဲ့တှရေဲ့ကွားမှာ မသိမသာတဈမြိုး၊ သိသိသာသာတဈမြိုး သူ့နိုငျငံအတှကျအမွတျထှကျအောငျလုပျနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျးတဈခု…
ဒါတှကေိုဇာတျသှားက စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးအောငျ ခြိတျဆကျပွသှားတဲ့ဇာတျလမျးကောငျးလေးတဈပုဒျပါ
စဈကားဆိုပမေဲ့ အမွဲတမျးတိုကျခိုကျနတောမြိုးမဟုတျဘဲ မွှုပျကှကျလေးတှနေဲ့ ဇာတျလမျးက ကွညျ့ရတာပငျြးမသှားစရေပါဘူး။ ဇာတျလမျးကောငျးလေးဖွဈတာကွောငျ့ စဉျးစားမနဘေဲ ဝငျကွညျ့လိုကျပါတော့လို့
စစ်ကားတွေကိုကြိုက်တတ်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းလေးတစ်ခု တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
အန်တိုနီဆိုတဲ့လူက သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ သူ့ညီမကို ဆီးရီးယားကစစ်သတင်းတစ်ခုမှာ တွေ့လိုက်ရပြီးတော့ သူ့ညီမကိုရှာဖို့အတွက် ဆီးရီးယားကိုလိုက်လာရင်း ကတ်ဒ်လူမျိုးတို့ရဲ့ တပ်ဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်ပြီး ISIS တွေကို တိုက်ခိုက်လာရတဲ့အခါ….
တစ်ဖက်က ISIS တပ်ဖွဲ့မှာလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက အတူတူကြီးပြင်းခင်မင်လာတဲ့ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်သားရဲ့ဇာတ်လမ်း…
ဒီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားမှာ မသိမသာတစ်မျိုး၊ သိသိသာသာတစ်မျိုး သူ့နိုင်ငံအတွက်အမြတ်ထွက်အောင်လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု…
ဒါတွေကိုဇာတ်သွားက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင် ချိတ်ဆက်ပြသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ
စစ်ကားဆိုပေမဲ့ အမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မြှုပ်ကွက်လေးတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းက ကြည့်ရတာပျင်းမသွားစေရပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့် စဉ်းစားမနေဘဲ ဝင်ကြည့်လိုက်ပါတော့လို့
Review – Yue Laing
File Size – 500 MB (1 episode)
Duration…1hr (1 episode)
Genre : Drama, Action & Adventure ,War
Translated by Yue Laing
Airs OnArte, OSN
ProductionARTE, Fremantle, Haut et Court, HULU, Masha Productions, Spiro Films, Versus Production
Firt air date2020-09-18
Last air date2020-09-18
Home PageNo Man’s Land Complete
1 No Man’s Land Complete - Season 1
No Man's Land 1x1 2020-09-18
ลองของซีรีส์ (Long Khong) Complete